Archive du 20180720
Fanabeazana Ampiadian’ny fanjakana ireo mpampianatra
Noho ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ireo zanaka Malagasy rehetra, dia miato aloha ny tolon’ny mpanabe eto Madagasikara, hoy ny fanambaran’ireo andiana mpampianatra teny amin’ny CEG Antanimbarinandriana, notarihin-dRandrianarivo Hasiniaina omaly.
Fifidianana ho filoham-pirenena Misomokotra mikarakara taratasy ireo kandidà
Tsy dia re tsaika firy ireo kandidà efa nanao fanambarana ampahibemaso fa hirotsaka hofidiana filoham-pirenena amin`ity taona 2018 ity. Herinandro roa monja sisa dia hiroso amin`ny fanaterana ireo taratasim-pilatsaham-kofidiana ireo kandidà handray anjara.
Governemanta Ntsay Lany andro manova mpiara-miasa
Sarotra ny hino fa lojika anaty fitondram-panjakana iray ny fisiana fanendrena olona miisa 70 dia misy 42 hafa indray avy eo herinandro aorian’izay.
Raharaham-pirenena Hilaza ny heviny i Onitiana Realy
Hilaza ny heviny momba ny raharaham-pirenena anio alina amin’ny alalan’ny fandaharana manokana ao amin’ny fahitalavitra TV Plus Madagascar, Rtoa Onitiana Realy , minisitry ny mponina nandritra ny 3 taona.
Kandida Eliana Bezaza Ho vedetina sarimihetsika
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny ofisim-pirenena momban’ny sarimihetsika Analakely na Omaci omaly ny fivoahan’ny sarimihetsika fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe « Tsy ny vary no very fa i Madagasikara ».
Mampihomehy be daholo !!
Hahahahahaha ! Ripaka aho ee ! Tapaka ny tsinaiko ! Tena mampihomehy be daholo ianareo ireto ry Jean ka ! Fa izy ity ve aminareo kilalao e ?
Hanamorana ny afera maloto Lasa bizina ny fikatsaham-pahefana
Ny mpanao politika sasany eto amintsika dia maro ny nanana olana ara-pitsarana noho ny afera maloto na koa tratry ny olana ara-piarahamonina tsotr’izao, dia ny fahefana am-pelatanana no hezahina fikirina hiarovan-tena.
Antsirabe Zaza 7 volana maty voatsatok’antsy
Mpivady mbola tanora no nahavita nahafaty ny zanany tao amin’ny fokontany Ampatana tamin’ity herinandro ity. Ny talata lasa teo no nitrangan’izany tao akaikin’ny abatoara Antsirabe.
Rallye de Mangoro 2018 Ny fiara Karenjy Mazana II no laharana « 00 »
Handray anjara amin’ny rallye de Mangoro 2018 karakarain’ny Tasamm ho tontosaina ao Moramanga anio zoma 20 sy rahampitso sabotsy 21 ary ny alahady 22 jolay 2018 izao ny fiara pick-up Mazana II vokarin’ny orinasa Malagasy Karenjy ka hitondra ny laharana « 00 »
Rugby à XV eny amin’ny kianja ANS Ady omby mifahy 4 be no atolotry ny FTMRAT
Hafana tokoa ny eny amin’ny kianja Ans Complexe Ampefiloha amin’ny alahady faha-22 jolay ho avy izao amin’ireo lalao rugby karakarain’ny FTMRAT “Fikambanan’ny Tanora Mpanao Rugby Ambany Tanàna”
Valala tsy an-tànana tsy hatolo-jaza hoe e ?
Vao nirotsaka hofidiana Rajaonarimampianina dia efa nipatrapatraka ny fampanantenana, toy ilay hoe 3 volana dia mivaha ny delestazy, saingy aty amin’ny fiarafaran’ny fotoam-piasana vao may atsy may aroa fa hiasa amin’izay hono.
Taksibe sasany eto Antananarivo Hampiakatra ny saran-dalany ho 500 Ariary
Hampiakatra ny saran-dalany ho 500 Ar avokoa ireo koperativa miisa fito mivondrona ao anatin’ny FMA, manomboka amin’ny fiandohan’ny volana aogositra ho avy izao. Anisan’ireny ny taksibe ao amin’ny koperativa Mirindra 163 sy 194, ny koperativa Sitraka ao amin’ny zotra 109, ny zotra 165, ny koperativa KOFITAMA 143…
Minisitry ny fanabeazam-pirenena Efa tsy nahavaha olana hatry ny ela
Lany olomanga sy manampahaizana ve ny Malagasy ka tsy mety raha tsy olona iray no haverimberina amina andraikitra samihafa ao anatin’ny taona maro mifanesy ?
Kandida Eric Rajaonson “Hanao revolisiona politika isika”
Niampy iray indray ! Nanamafy ny maha kandidà ho filoham-pirenena azy i Eric Rajaonson.
Tranombarotra Baolai Miezaka hatrany mitsinjo ny daholobe
Ho fanatsarana ny sehatra asa misy azy, dia maro ny orinasa tsy miankina no manavao hatrany ny tolotra omeny ny mpanjifa araka ny fahefa-mividiny.
Ray aman-dreny tsy afaka mandoa ekolazy lafo Hijoro hanampy azy ireo ny CNTEMAD
Betsaka ireo ray aman-dreny tsy afaka mandoa saram-pianarana lafo intsony amin’izao noho ny fahasarotan’ny fiainana.
Tale jeneralin’ny CNaPS Hentitra amin’ny fanajana ny zon’ny mpiasa Malagasy
Misy amin’ireo mpiasa eo anivon’ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM) no tsy misitraka Fiahiana ara-tsosialy.
Olona kizitina sy mora misafoaka Vokatry ny ratram-po sy ny fahasahiranana
Lasa sarotra iaraha-monina ny ankamaroan’ny olona eny anivon’ny fiarahamonina ankehitriny.
Minisiteran’ny Indostria Hampandroso ireo koperativa mpamokatra
Omaly alakamisy 19 jolay no nanatanteraka atrikasa ny minisiteran’ny Indostria, ny sehatra tsy miankina ary ireo koperativa mpamokatra.
Kolikoly Lasibatra hatrany ny firenena Afrikanina
80 miliara dolara na 265 882 400 000 000 Ariary (1dolara=3323,53Ariary) no vola very isan-taona aty Afrika noho ny kolikoly. Raha manao kaonty ambany ka mandray ny firenena afrikanina miisa 55 dia manary vola 1,4 miliara dolara na 4 652 942 000 000 Ar isan-taona ny firenena iray.